Vaovao - Inona no fomba tsara indrindra hanaovana satroka baseball
Indraindray, raha mieritreritra ianao fa tsotra loatra ny fiakanjoanao ivelany, dia azonao atao ny manomana satroka baseball amin'ny fomba fanatanjahan-tena mahazatra. Ho fanampiana be dia be amin'ny fombanao izany. Tsy mila zavatra kely loatra handravahana izy, ary ny satroka baseball dia mety hahatonga ny fombanao ho lasa olo-malaza sy tsara tarehy, fa inona no fijery tsara indrindra amin'ny satroka baseball?
Baseball cap + taratasy akanjo ba lava lava miloko:
Ny akanjo lava manakan-doko manala loko dia fanatanjahan-tena ihany koa, ary mety tsara amin'ny kapa baseball. Akanjo mahazatra dia tsy miteraka fifandonana hita amin'ny satroka. Ny fampifangaroana ba kiraro mitaingina sy kiraro mahazatra dia tsara ihany koa. Vao mainka tsara tarehy kokoa ny manao solomaso.
Satroka baseball + T-shirt + zipo hip:
Ny satroka baseball sy ny zipo amin'ny valahana dia afaka mijoro irery koa. T-shirt miloko marefo tsy misy fangarony miaraka amina paosin-doko mifanohitra fonosana feno loko tanora, afangaroy sy afangaro amin'ny satroka baseball
Akanjo baseball + akanjo + palitao kardigan:
Ny fanakalozan'ny akanjo sy akanjo ba kardigan dia tena fanatanjahan-tena, manome ny olona fahatsapana ahazoana aina sy mailaka. Manampy fomba hafa ny fampidirana ny satroka baseball.